ဘုံအသိပညာ - ဟန်ကျိုး DryAir ကုသမှု Co. , Ltd မှ
Dehumidification ၏ modes:
1. အအေးခံခြင်း dehumidification
ဤနည်းလမ်းကိုနှင်းအချက် 8 ~ 10 ℃သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောအခွအေနေအောက်မှာထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။
2. Compression ကို dehumidification
လေတိုက်အသံအတိုးအကျယ်သေးငယ်ပေမယ့်ကြီးမားတဲ့လေတိုက် volume ၏အခွအေနအဘို့မသင့်တော်အခါဤနည်းလမ်းကိုထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။
3. အရည်စုပ်ယူ dehumidification
နှင်းအမှတ် -20 ℃သို့မဟုတ်ဒါလျှော့ချနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများကြီးမားသည်ကို၎င်း, စုပ်ယူအရည်ကိုအစားထိုးရမည်ဖြစ်သည်။
4.Wheel-type အမျိုးအစားကာလဖြစ်ပါသည် dehumidification
impregnated စိမ် hygroscopic အေးဂျင့်များ၏ကြွေအမျှင်လေဝင်လေထွက်အဘို့ပျားလပို့ကဲ့သို့အပြေးသမားသို့လုပ်ငန်းများ၌နေကြသည်။
အဆိုပါ dehumidification ဖွဲ့စည်းပုံမှာနှင်းအချက်များကိုအထူးပေါင်းစပ်မှတဆင့် -60 ℃ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းရောက်ရှိနိုင်သည့်, ရိုးရှင်းပါသည်။
ဤသည် Jierui အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
NMP N-methyl-2-Pyrrolidone အတိုကောက်
NMP မြင့်မားသောကြွက်ကြွက်ဆူသောအချက်များနှင့်ပုံမှန်အပူချိန်အောက်မှာနိမ့်ရေနွေးငွေ့ဖိအားရှိပါတယ်ကတည်းကကြောင့်အလွယ်တကူပုံမှန်အပူချိန်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအေးတို့ကသိပ်သည်းစေနိုင်သည်။ Antoine ၏ပုံသေနည်းအရ၎င်း၏ဝိသေသအားဖွငျ့ NMP ၏ပြန်လည်နာလန်ထူ (လေမှုတ်စက်အိပ်ဇောဓာတ်ငွေ့ကိုပိုမိုရေပါရှိသည်လျှင်ရေပြန်လည်နာလန်ထူပမာဏကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းပေး) အေးတို့ကကောက်ယူနိုင်ပါတယ်။
အားသာချက်များကို VOC အာရုံစူးစိုက်မှုရဟတ်၏:
1.High စွမ်းဆောင်ရည် & ထိရောက်မှု
ကြီးမားထိစိမ့်စွမ်းရည်နှင့်အတူမြင့်မားတဲ့ silica zeolites နှင့် activated ကာဗှအသုံးပြုခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ VOCconcentrator ပြင်သာပြောင်းသာစစ်ဆင်ရေး၏ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများအောက်တွင် VOCs နှင့်အလုပ်အမျိုးမျိုးဆက်ဆံဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
မြင့်မားသောကြွက်ကြွက်ဆူသောအချက်နှင့်အတူ VOCs ကုသ၏ 2.Capability
ကာဗွန်ပစ္စည်းက၎င်း၏ desorption အပူချိန်န့်သတ်ချက်ကြောင့်မြင့်မားတဲ့ကြွက်ကြွက်ဆူသောအချက်နှင့်အတူ VOCs ဆက်ဆံဖို့တစ်ဦးအခက်အခဲရှိပါတယ်။ ဆနျ့ကငျြ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ zeolite ရဟတ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများမြင့်မားတဲ့အပူချိန်နှင့်အတူထိစိမ့်လေထုသုံးစွဲဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ VOC အာရုံစူးစိုက်မှုဖွသော incombustible နှင့်မြင့်မားသောအပူခုခံကြသည်။
အလွယ်တကူအပူစွမ်းအင် (စသည်တို့ကိုဥပမာ styrene, cyclohexanone,) က polymerized VOC ထိထိရောက်ရောက်မြင့် silica zeolite ခြင်းဖြင့်ကုသနိုင်ပါတယ်။
အထူးအပူကုသမှုအားဖြင့် 4.Cleanability & activation
calcining လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ zeolite ရဟတ်အဆိုပါကော်အပါအဝင်အားလုံးအော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းကိုမှလာကြပြီ။ အဆိုပါရဟတ်ဒြပ်စင်အတွက်ပိတ်ဆို့ use.But တစ်အချို့သောကာလအပြီးတွင်ပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်, မစိုးရိမ်ပါ !! အဆိုပါရဟတ်တောင်ပိုကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ zeolite ရဟတ်အခြေအနေများအရသိရသည်အပူကုသမှုအားဖြင့်ပြန်လည်သက်ဝင်နိုင်စုဆောင်း dust.It ရဲ့ဖယ်ရှားပစ်ရန်သင့်လျော်ထုံးစံ၌ရေချိုးနိုင်သောဖြစ်ပါတယ်။
VOCs ထိန်းချုပ်မှုမှဖြစ်နိုင်ပါ့မလား Facility / ကုန်ပစ္စည်းလိုင်းဘာသာရပ်
Automotive / အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်သည့် တဲပန်းချီ Toluene, Xylene, Ester, အရက်
သံမဏိပရိဘောဂထုတ်လုပ်တဲ့ တဲ, မီးဖိုပန်းချီ
ကော် / သံလိုက်တိပ်ထုတ်လုပ်သူ ယူနစ်ပျော်စေ coating ဖြစ်စဉ်ကို, Ketones, MEK, Cyclohexanone, Methylisobutylketones, etc
ဓာတုပစ္စည်းများ ရေနံသန့်စင်စက်ရုံကို, ဓာတ်ပေါင်းဖို မွှေးကြိုင်ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်, အော်ဂဲနစ်အက်ဆစ်, Aldehydes, အရက်
ဒြပ်ဗဓေလသစ် / ကော်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို ပလတ်စတစ်, အထပ်သားကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကို Styrene, Aldehydes, Ester
semi-conductor ပျော်စေယူနစ် အယ်လ်ကိုဟော, Ketones, Amin
° Cdp g / ကီလိုဂရမ် ° Fdp ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း / ပေါင်
-28 ၌ 0.28 -18,4 2
-27 ၌ 0.31 -16,6 2.2
-4 2.7 24.8 လောက်ရှိနေပါတယ် 18.9